Lewandowski oo ku wargeliyay Bayern Munich go’aanka ugu dambeeya ee mustaqbalkiisa – Gool FM
Lewandowski oo ku wargeliyay Bayern Munich go’aanka ugu dambeeya ee mustaqbalkiisa
Dajiye May 13, 2022
(Munich) 13 Maajo 2022. Safarka weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski ee kooxda Bayern Munich ayaa ku dhow inuu soo afjarmo kaddib 8 sano oo uu ciyaaryahanku ku qaatay garoonka Allianz Arena.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Poland ayaa qandaraas kula jira kooxda Jarmalka ilaa xagaaga 2023, laakiin waxay u badan tahay inuu ka tagi doono dhammaadka xilli ciyaareedkan, wuxuuna ku wajahan yahay mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub.
Shabakada Sky Sport ee dalka Germany ayaa shaacisay arrin la yaaab leh ee ku saabsan mustaqbalka Robert Lewandowski, iyadoo la sheegay in 33-sano jirkan uu ku wargeliyay maamulka kooxda Bavarian-ka inuu doonayo inuusan cusbooneysiiyo qandaraaskiisa.
Wararka ayaa waxay sheegayeen xilliyadii la soo dhaafay in Lewandowski uu xiiseynayo inuu tijaabiyo loolan cusub ee ka baxsan kooxda Bayern Munich, kaddib sanado badan uu goolo il qabad leh ku gaaray maaliyada Bavarian-ka.
Inkastoo ay soo baxeen warar sheegaya in Lewandowski uu ka carooday qaddarin la’aantiisa dhaqaale, haddana Shabakada Sky Sport ayaa meesha ka saartay in lacagta ay door ku leedahay go’aanka Robert Lewandowski.
Waxa aan meesha laga saarin suurtagalnimada ah in Bayern Munich ay iska fasaxdo Lewandowski xagaagan, gaar ahaan marka la eego rabitaanka ciyaaryahanka ee u dhaqaaqista Barcelona, oo aad u xiiseeneysa inay la saxiixato.
Mikel Arteta oo si kulul u weeraray garsooraha kaddib guuldarradii Tottenham
Klopp oo xaqiijiyay maqnaanshaha xiddig ka tirsan Liverpool kulanka finalka ee FA Cup